Ny marika famantarana ny kristianina
"Ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny, mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahintsika na heverintsika aza, araka ny hery izay miasa ato amintsika." - Efes. 3:20
Miandry ny Tompo ny hanehoany ny fahasoavany sy ny heriny amin'ny alalan'ny olony. Saingy takiany kosa izay rehetra mirotsaka amin'izany fanompoana izany mba hampifantoka ny sainy ho any Aminy mandrakanva. Tokony hanana fotoana isan'andro isan' andro izy hamakiana ny Tenin' Andriamanitra sy hanandratana vavaka (...)
Tokony hiara-mandeha sy hifampi­resaka amin'Andriamanitra isika tsirairay, dia hiseho eo amin'ny fiainantsika ny hery miasa man­gina sady masina an'ny filazan­tsaran'i Knsty ao anatin'ny hasaro­bidiny manontolo.
Mahery lavitra kokoa noho ny fàh~iza-mampiasa teny ny fiainana milamina sy mirindra hita eo amin' ny tena Kristianina. Manana hery miasa mangina bebe kokoa ny toetra asehon'ny olona noho ny teny lazainy.
Rehefa niverina ireo mpiandry raharaha nalefa teo amin'i Jesôsy dia rulazafatsy mbola nisy mihitsy olona niteny tahaka ny nitenenany. Nefa ny anton'izany dia satria tsy nisy olona nivelona tahaka ny nivelo­many. Tsy ho afaka niteny tahaka ny nataony Izy raha hafa noho izany ny fiainany. Nitondra hery naharesy lahatra ny teniny satria avy amin'ny fo madio sy masina feno fitiavana sy firaisam-po, fian­trana sy fahamarinana.
Ny toetra amam-panahintsika sy ny fanandramanana niainantsika no mametra ny hery avy amintsika ary miasa amin'ny hafa. Mba handresentsika lahatra ny hafa ny amin'ny herin'ny fahasoavan'i Kristy, dia tsy maintsy fantatsika aloha ny heriny ao am-pontsika sy eo amin'ny fiainantsika. Ny filazan­tsara asehontsika ho famonjena ny fanahy dia tsy maintsy ho filazantsara izay efa namonjy ny fanahintsika koa. Amin'ny alalan' ny finoana velona an'i Kristy ho Mpamonjin'ny tena manokana ihany no mety hahatonga ny hery avy amintsika ho tsapa eo amin' izao tontolo izao tsy manam-pinoana. Raha tiantsika ny hitarika ny mpanota avy amin'ny riaka mahery, dia tsy maintsy ho tafaorina mafy eo amin'ilay Valolampy, dia i Kristy Jesôsy, isika.
Ny famantarana ny maha-Kristianina dia tsy marika eo ivelany, tsy ny fitondrana hazo fijaliana na satroboninahitra, fa izay asehon'ny firaisan'ny olona amin'Andria­manitra. Amin'ny alalan'ny herin'ny fahasoavany aseho eo amin'ny fiovan'ny toetra amam-panahyno handresen-dahatra an'izao tontolo izao fa naniraka ny Zanany ho Mpanavotra azy Andriamanitra.